Fincila Diddaa Gabrummaa Ummata Oromoo Ilaalchisee: Bakka Gahamee, Waan Tahuu Maluu fi Kan Godhamuu Qabu. Oromia Shall be Free |
bilisummaa December 18, 2015	Comments Off on Fincila Diddaa Gabrummaa Ummata Oromoo Ilaalchisee: Bakka Gahamee, Waan Tahuu Maluu fi Kan Godhamuu Qabu.
Qabatamaan Bakka Amma Jirru:
– Sochiin Ummatni Oromoo godhaa jiru baatii tokko xumuree lammaffaa jalqabeera.
– Yeroo baatii tokko kana keessatti ummatni MP mormuu duwwaa osoo hin taane tarkaanfii bulchiinsa mataa isaa uummachuu bakka heddutti fudhateera.
– Kun kan agarsiisu sochiin godhamaa jiru kan MP dhaan mormuu duwwaa osoo hin taane gaaffii abbaa biyyummaa taheera.
– Sochiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti tahuun humna ummatni Oromoo tokko tahee ka’uu qabu firaa fi diinatti agarsiisee jira.
– Warri Oromoo tuffataa turan amma isa kabajaniiru. Warri duruu isa sodaatan ammoo sodaan waan godhanii fi dhiisan wallaalchisaa jira.
– Ummatni Oromoo wareegama kaffalamaa jiruun osoo hin rifanne, jabinaan sochiicha haaromsaa deemuun guddaa kan nama boosuu fi abdachiisuu dha.
– Sochiin golee Oromiiyaa mara waliin gahe kun Oromoon tokko tahuu mirkaneessee jira.
– Sagaleen Oromoo daangaa Oromiyaa fi biyyota olla cehee addunyaa keessatti dhaga’amaa jira. Kun kan ittin boonnu dha.
– Sochiin ykn warraaqsi kun caasaa mootummaa keessatti shakkii uumee, lammiin Oromoo mootummaaf hojjatan warraaqsa cinaa dhaabatan dabalaa jira.
Waan Tahuu Malu Lamatu jira:
1. Sochii kana laaffisuun of duuba deebisuu
– Wayyaaneen humnaan sochii kana laaffisuun of duuba deebisuu ykn dhaamsuu
– Ummatni gochaa faashistummaa Wayyaanee irraa dandamachuu dadhabee sochii dhiisuu
Yoo warraaqsi kun dhaabbate ykn of duuba deebi’e:
o Wayyaaneen aarii guddaan ummata ni miiti.
o Akka ummatni lammata mataa ol hin qabannee godhuuf tarkaanfii adda addaa fudhatti.
o OPDO diigdee kallaatiin ofii bulchiinsa dhuunfatti.
o Saaminsa Oromiyaa bifa hamaa taheen gaggeessiti.
o Sabboontoota Oromoo mana hidhaatti guurtee gochaa sanyii duguggii gaggeessiti.
o Mootummaa Oromiyaa illee diiguu ni malti.
o Afaan Oromoo illee afaan hojii fi barnootaa tahuun hafuu mala.
o Kkf as bahuu mala
2. Sochiin furga’ee galii isaa gahuu
Warraaqsi jalqabe itti fufee mootummaa Wayyaanee bakkaa kaasuun galii isaa gahuuf wanneen godhamuu qaban:
– Sochiin kun adda cituu hin qabu. Tooftaa jijiiruun itti fufuu qaba. Qeerransa eegee hin qaban, qabnaan gad hin dhiisan.
– Naannoo hundaatti akkuma amma duraatti ummatni socho’uu qaba. Naannoon tokko ka’ee kaan yoo cal’ise wal irra ilaaluu fi hamilee cabuun dhufuu mala. Kanaaf bakka hundaa sochiin itti fufuu qaba.
– Sochiin kun addunyaa biratti daran dhageetti akka argatuun naannoo FF irratti yoo jabaate gaarii dha. Karaa FF seenan shanan cufuu.
– Sadarkaa duraatti akka magaalaalee gurguddaan humna boba’aa hin argannee gochuuf bottee rukutuu. Botteen rukutaman kan kubbaaniyaa mootuummaa yoo tahan gaarii dha.
– Caasaa mootummaa diiguu keessa tokko Oromoota mootummaaf humna waraanaa, polisii, tikaa fi milishaa hojjatan akka lammii isaanii bira dhaabbatan waamuu. Yoo didan hawaasa keessaa isaa walabu: ummatni isaan lagachuu, uggura adda adda irra kaa’uu.
– Sabootni gara biraa akka sochii Oromoo bira dhaabbatan hawwachuu. Saboota olla wajjin wannen wal dhabbii uumu irraa of qusachuu.
– Oromoon qabeenya isaan qabsoo gaggeesuu. Omisha isaa gabaati baasuu dhiisuu.
– Qabeenya hojiif barbaachisu biyya keenyaa burqisiisuuf tattaafachuu
– Fakkeenyaaf caatiin akka gabaa hin baane guyyoota muraasaaf godhuun yoo danda’ame warreen akka Jabuutii fi Hargeessaa harka kennachiisuu dandeenya.
– Oduu mootummaa afaanfajjeessu (rumors) gad dhiisuun mootummaa jaanjessuu.
– Moot. Irratti itti fufiinsaan olola oofuu – saaxiluu ummataa fi addunyaa biratti
Wanneen godhamuu qaban itti fufiinsaa waliif dhaamna.
Previous B/G KAMAL GALCHU SAYS TPLF IS COLLAPSING
Next Home › Horn of Africa › Oromia › Ethiopia › Don’t kill us or don’t dispose us to killers, instead stand by us, the Oromo Don’t kill us or don’t dispose us to killers, instead stand by us, the Oromo